Australia 15Days | GO & GO Travels
တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့သြော်စတြေးလျှတစ်နိုင်ငံလုံး ကို လည်ပတ်ရမည့် ခရီးစဉ်
14 Days InThe Very Best of Australia
Yangon – Perth – Brisbane – Gold Coast – Sydney – Canberra – Melbourne
အသုံးပြုမည့်လေကြောင်း - ထိုင်းအဲဝေးအင်တာနေရှင်နယ် ( TG )
Transit Point - ဘန်ကောက်
ခရီးစဉ် အစ ^ အဆုံး ကြာမြင့်ချိန် - ၁၅ ရက်
As stated toamaximum of 01 FOC on Twin share basis for the various group sizes.
Day 1 :Arrival Day at Perth Airport ( L/D )
သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၊ ပတ် လေဆိပ်သို့ ၊ သြစတြေးလျှစံတော်ချိန် - နံနက် ( ၀၇း၅၀ ) အချိန်တွင်၊ ထိုင်းအဲဝေး လေယဉ် (ွှ ၄၈၅ ) ဖြင့် ဆိုင်ရောက်ပါမည်။ လေဆိပ်တွင် မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ တဆက်တည်း ပတ်မြို့ ကို စတင်လည်ပတ်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ပတ်မြို့ ၏ အထင်ကရနေရာဖြစ်သော Barrack Arch, Parliament House, Bell Tower (no admission), Fremantle City tour of Monument Hill, Round House, Fisherman Harbour, The Esplanade, visit Weekend Market (Open Fri - Sun only) တို့ ကိုလည်ပတ်ပြီး၊ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးနောက် ( ၁၅း၃၀ ) အချိန်တွင် တည်းခိုမည့် ကြယ်သုံးပွင့်အဆင်ရှိ ဟိုတယ်သို့ထွက်ခွါကာ၊ ဟိုတယ် ဃ့နခု ငည ကို မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှပြုလုပ်ပေးနေစဉ် ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမ၌ ခေတ္တအနားယူနေ ပါမည်။ (Standard Hotel check in time is after 1400hrs) မိမိတို့ အခန်းများထဲတွင် ပစ္စည်းများနေရာချ ပြီးနောက်၊ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ရန်၊Esplanade Fremantle Hotelသို့ ထွက်ခွါပါမည်။ Esplanade Fremantle Hotel ရှိ Local Restaurantတွင် အရသာရှိသော သြစတြေးလျှ နိုင်ငံ ရောက်ပထမဦးဆုံး၊ ဘူဖေး နေ့ လည်စာကိုပျော်ပျော်ပါးပါး သုံးဆောင်ကြပါမည်။ နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ကာ ညနေစာမသုံးဆောင်မီအချိန် ထိ့အနားပေးထားပါမည်။ ညနေ ၆ နာရီခန့် တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ ညနေစာကို တရုတ်စားသောက် ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ရန်ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day2:Perth Full Day Sightseeing ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နာမည်ကျော် Swan Valley tour ခရီးစဉ်ကို လည်ပတ် ရန် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ Full day to Swan Valley tour - Tumbulgum Farm Sheep Shearing Show, visit Mondo Nougat Factory (Shop Closed on Monday), Visit Chocolate factory & sample some handmade Chocolate, Wine tasting at Sandal ford Winery န့ လည်စာကို Valley View Garden Cafe & Restaurant တွင် အနောက်တိုင်းစတိုင်အစားအသောက်သုံးဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပြီး၊ ညနေစာကို ထိုင်းစတိုင်ဖြင့် တည်ခင်းပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day3:Perth Full Day Sightseeing - Departure ( B/L/D ) to Brisbane by flight
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ တခါတည်း ဟိုတယ်ထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ ( Morning Standard Hotel check out time is 1000 hrs )။Mandurah သို့ ထွက်ခွါကြပါမည်။ ညြေိကမေ့ သို့ ရောက်လျှင် နာမည်ကျော်ထွက်ကုန်တမျိုးဖြစ်သည့် မာကာဒါမီယာစေ့(Macadamia nut ) ထုတ်လုပ်သည့် မက်နပ်ပ်စက်ရုံကို ပထမ ဦးစွာသွားရောက်လည်ပတ်လေ့လာပါမည်။ နေ့ လည်စာကို Mandurah တွင်Lunch ကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ တစ်နာရီကြာသင်္ဘောဖြင့်လည်ပတ်ရသော၊ ပျော်ရွှင်စရာတိုးခရီး စဉ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် Canal Estuary & Dolphin spotting cruis ကို ပျော်ပျော်ပါးပါးလည်ပတ်ယင်း Dolphin Market ကိုပါသွားရောက်လည်ပတ် လေ့လာကြပါမည်။ မွန်းလွှဲပိုင်းတွင် ပတ်မြို့ ကို ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ ပတ်သို့ ရောက်လျှင် ဟားဗားတောင်းတွင် ဈေးဝယ်ရန်ပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် လွတ်လပ်စွာဈေးဝယ်နိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက် ညနေစာသုံးဆောင်ကြပါ မည်။ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ( ၁၉း၀၀ ) အချိန်တွင်၊ မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ပတ်မြို့ပြည်တွင်းလေဆိပ်ကို ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ပတ်မြို့ မှတဆင့် ဘရစ်စဘိန်းသို့ ပျံသန်းထွက်ခွါပါမည်။ ဘရစ်စဘိန်းလေဆိပ်ရောက်လျှင် မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ ညလေယာဉ်ဖြင့် ဘရစ်စဘိန်သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ် တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day4.Arrival Day at Brisbane ( B/ L/D )
နံနက်စောစောတွင် ဘရစ်စဘိန်းလေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်ပါမည်။ လေဆိပ်တွင် မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ပြီး၊ နံနက်စာသုံးဆောင်ရန်ခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်တဆက်တည်း ဘရစ်စဘိန်း ဃငအပွှသကမ ကို စတင်လည်ပတ်ကြရာတွင် သမိုင်းဝင်နေရာများဖြစ်သော့ historic locations and historic homes, the popular South Bank Parklands, Town hall, view of Brisbane River, Lone Pine Koala and Mount Cootha တို့ကိုလည်ပတ်လေ့လာကြည့်ရှုပြီး၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ဟိုတယ်သို့ ပို့ ဆောင်၊ ၀င်ခွင်လုပ်ပေးပါမည်။ ဘရစ်စဘိန်းတွင်ညအိပ် ပါမည်။ ယနေ့ အတွက် နေ့ လည်စာနှင့် ညနေစာများကို BBQ Lunch at Lone Pine Koala and standard Chinese dinner at local restaurant တွင်သုံးဆောင်ရန်စီစဉ်ထားပါသည်။
Day5Brisbane – Gold Coast by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုကာ လေဆိပ်မှ ၄၅ မီနစ်ခန့် ကားဖြင့်သွားရသော၊ ဂိုးလ်ကို့ စ်မြို့ သို့ ထွက်ခွါပါမည် ဂိုးလ်ကို့ စ်သို့ ထွက်ခွါပါမည်။ ဂိုးလ်ကို့ စ်သို့ပျော်ရွှင်စရာ Movies World သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့ လည်စာကို Movies World ထဲရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။ ညနေ တွင် မှ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ၊ ညနေစာ ကို Local Restaurant တွင် သုံးဆောင်ပြီး၊ တည်းခိုမည့်ွGold Coast ရှိ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day 6.Gold Cost ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ ဂိုးလ်ကို့စ်၏ နာမည်ကြီးထင်ရှားသော ပင်လည်ကမ္ဘာ (ှနွျှေသမိူ)သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါ မည်။ ညနေစာကိုသုံး ဆောင်ပြီး နောက်၊ တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပါမည်။ ဂိုးလ်ကို့စ်မြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day 7.Gold Coast – Brisbane – Sydney by flight ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် (၁၀း၀၀)နာရီတွင် ဟိုတယ်မှထွက် ခွာခွင့်လုပ်ပြီး၊ ဆစ်ဒနီမြို့သို့လည်ပတ်ရန် လေယာဉ်ကွင်းသိုက ထွက်ခွာပါမည်။ ဆစ်ဒနီမြို့ လေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင၊် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး တဆက်တည်း ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ဃငအပ အသကမ အနေဖြင့် လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ Darling Harbour, Circular Quay, Sydney Harbour Bridge, Sydney Opera House (outside view only), Mrs. Macquarie's Chair, King Cross, The Rocks, Parliament, Chinatown ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ တည်းခိုမည့် ဟိုတယ်သို့ ပို့ဆောင် ဃ့နခှုည လုပ်ပေး ပါမည်။ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။Standard Chinese lunch at Nine Dragon Restaurant. and Early buffet dinner at Star City Garden Buffet ( 1700 - 1800 ) (LCH, DNR).
Day 8.Sydney - Blue Mountain Tour – Sydney by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် ဘလူးမောင်တိန်း (Blue Mountain) သို့ သွားရောက် လည်ပတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘလူးမောင်တိန်းမရောက်ခင်Feather dale Wildlife park သို့ ၀င်ရောက် လည်ပတ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ဆက်လက်ပြီး ဘလူးမောင်တိန်း (Blue Mountain))သို့ ဃဘေူန ကားဖြင့်တက်ရောက်ပြီး အံ့မခန်းဖွယ်လှပသော ဘလူးမောင်တိန်း Blue Mountain)) ၏ အလွန်နာမည်ကြီးထင်ရှားသော Three Sisters rock formation ၏ ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း လည် ပတ်ကြပါမည်။ ညနေတွင် ဆစ်ဒနီမြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါ မည်။ ဆစ်ဒနီမြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Enjoy the Discovery Pass Rides - Cableway + Railway + Skyway along themountains. Standard Chinese lunch at local Restaurant. Return to Sydney and havestandard Thai dinner at local Restaurant., (BKF, LCH, DNR).Overnight in Sydney.
Day9Sydney - Canberra Tour – Sydney by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ သြစတြေးလျှနိုင်ငံ၏မြို့ တော်၊ ကမ်ဘာရာမြို့ သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ကမ်ဘာရာသို့ ရောက်လျှင် ကမ်ဘာရာမြို့ တော်တိုးကိုလည်ပတ်ရာတွင် Discover the home of the Australian Story in Canberra, including Parliament House, Australian War Memorial, The National Gallery of Australia, The National Science and Technology Centre, the High Court of Australia and the National Museum of Australia တို့ ကို လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ဆစ်ဒနီသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ ဟိုတယ်သို့ ဝင် ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 10 Sydney - Port Stephen Tour – Sydney by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊Full day Port Stephen tour.Enjoy Moon shadow DolphinWatch Cruise and Buffet Lunch, 4WD Adventure includes Sand Boarding.တို့ ကို လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ဆစ်ဒနီသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ ဟိုတယ်သို့ ဝင် ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day11 Sydney - Melbourne by flight ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် Hotel Check Out ကာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလေဆိပ်သို့ပို့ ဆောင်နှုတ်ဆက်ပါမည်။ ဆစ်ဒနီလေဆိပ်မှ ပြည်တွင်းလေယာဉ်ဖြင့်၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းလှပသော၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ သို့ လေယဉ်ဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။ မဲလ်ဘုန်း လေဆိပ်သို့ ရောက်လျှင်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ တဆက်တည်း၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့ City Tour( Outside Only တို့ ကို လည်ပတ်ကြပြီးနောက်၊ Chadstone Shopping Center တွင် လည်ပတ်ဈေးဝယ်နိုင် ရန်လိုက်လံပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်သောကြောင့်ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ လွတ်လပ်စွာဈေး ၀ယ်နိုင် ပါသည်။ Thai City on Lygon Restaurant တွင် ညနေစာ သုံးဆောင်ပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်ကာ အိပ်စက်အနား ယူပါမည်။
Day 12 Melbourne - Philip Island by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ ဖီးလစ်ကျွန်း (Phillip Island ) သို့ လည်ပတ်ရန်ထွက်ခွါပါမည်။ ဖီးလစ်ကျွန်း (Phillip Island ) သို့ရောက်လျှင် ချာချီလ်ကျွန်း (Churchill Island )၊ ပင်ဂွင်းနန်းတော် ( Penguin Parade )၊ ကွာလာ ကွန်ဆာဗေးရှင်းစန်တာ ( Koala Conservation Centre) များသို့ လည်ပတ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ တနေကုန်လည်ပတ်ပြီးနေက် မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ မဲလ်ဘုန်းမြိုတွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day 13 Melbourne – Mornington Peninsula by coach ( B/L/D )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ Mornington Peninsula. Visit Sunny Ridge Strawberry Fsarm, Ashcombe Maze and Lavender Garden, Wineries. Standard Lunch at local Restaurant and Standard Dinner at Kedai Satay Restaurant တနေကုန်လည်ပတ်ပြီးနေက် မဲလ်ဘုန်းမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ မဲလ်ဘုန်းမြိုတွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day 14 Melbourne - Departure ( B/L/D ) ( Evening flight )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော လည်ပတ်မှု ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် Dandenong Ranges ကို သွားရောက်ပါမည်။Dandenong Ranges for bird feeding and enjoy your own way ride on Puffing Billy historic steam train ပြီးနောက် မဲလ်ဘုန်းမြို့ ထဲသို့ ပြန်လာကာ ညနေစာကိုသုံးဆောင်ပြီး၊ မဲလ်ဘုန်းလေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ပါမည်။
---------------- ပြီးပြည့်စုံသော ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါမည် --------------------
Perth : AMBASSADOR HOTEL 3* ( Or Similar )
Brisbane : HOTEL IBIS BRISBANE 3.5* (Or Similar)
Gold Coast : ISLANDER RESORT HOTEL 3* (Or Similar)
Sydney : METRO HOTEL SYDNEY CENTRAL 3.5* (Or Similar)
Melbourne : MERCURE HOTEL WELCOME 3.5* (Or Similar)
13/14 CavershamW'life + Tumbulgum Farm show, 12/13/14 Sandal ford Wine Tasting, 12-14Mandurah Dolphin & Scenic Cruise, 1 Bottle of Water per pax per day (600ml), 1213 – LonePine Admission (1145-1400), 0913 REV – Movie world admission, 0913 REV – SeaWorldadmission, 1314 Unlimited Discovery Pass (Rail+Sky+Cbl), 12/13 1hr Sandbrdg + 1,5hrDolphin + BftLch, 1113 Panny's Chocolate Group Admission (10+), 1213 PENGUIN (STD VIEW) & CHURCHILL ISLAND, 1213 Entry Only, EST Wine Tasting(MAX 20PAX on WE/25PAX onWD), Guided Tour + U Pick Strawberries
Meals :13 BKF + 14 LCH + 14 DNR
2 Nights in Perth + 1 Night in BNE +2Night in OOL +4Night in SYD +3Night in MEL
Private chartered vehicles with English speaking driver for transfers & sightseeing, transfers &tours on seat in coach basis. Fuel surcharge may apply without notice. Private charteredVehicles with English speaking driver for transfers & sightseeing. FIT(2-5 paxs) transfers &tours on seat in coach basis. Fuel surcharge may apply without notice.
Visa : Round about 198 USD
Others :Porter age ( Hotel in / out )/ One bottle Mineral Water per day per person / Myanmar Tour Leader
Above The Program’s Tour Cost by USD ( per person )
Sydney :METRO HOTEL SYDNEY CENTRAL 3.5*
1) Child +2Adults & Bed ( 80% Adult fare )
2) Child +2Adults & No Bed ( 60% Adult fare )
- ဗီဇာကြေး နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်လက်မှတ် ( နခသညသာပျှ ချူျေ ) နှင့်လေဆိပ်အခွန်
- လည်ပတ်မှု နှင့် လေဆိပ် ကြို ^ ပို့ များအတွက် အဲယားကွန်းကား ။
- ဟိုတယ် ( ၂ ယောက် အိပ်ခန်း နှင့် နံနက်စာ )
- ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သောလည်ပတ်မှုများအတွက် ၀င်ကြေးများ
- ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုဖေါ်ပြထားသော နံနက်^နေ့လည်^ညစာများ နှင့်ရေသန့်ဗူးတစ်နေ့ တစ်ဗူး
- အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့် လမ်းညွှန် နှင့် မြန်မာတိုးလီဒါ
- 1 Lagg ( Hotel in / out ) and2ways Domestic flight ticket fare for Gold Coast - Melbourne - Sydney
- အ၀တ်လျှော်ခများ / အချိုရည်၊ အရက် သရေစာ စားသုံးမှုများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ
- အချိန်ပိုကြေးများနှင့် ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုဖေါ်ပြမထားသော လည်ပတ်မှုနှင့် ၀င်ကြေးများ
ဧည့်လမ်းညွှန် နှင့် ယဉ်မောင်းအတွက် အပိုကြေးများ ။ Porter charges for airp